Mugabe oo La Xiray Iyo Milatariga oo La Wareegay Talada Zimbabwe. – Shabakadda Amiirnuur
November 15, 2017 10:09 am by admin Views: 119
Ciidanka Milatariga Dalka Zimbabwe ayaa gacanta ku dhigay talada dalkaas iyagoo xabsiga u taxaabay Madaxweynaha 93 jirka ah ee Roperto Mugabe. Mugabe ayaa todobaadkii hore shaqada ka ceyriyay ku xigeenkiisa Emmerson Mnangagwa kadibna waxaa bilowday is fahamwaa iyo qulqulatooyin siyaasadeed.
Taliyaha Milatariga Zimbabwe ayaa waxaa uu sheegay in haddii aysan xiisadda dejin Xibsiga talada haya ee Zanu PF-ay Milatariga faragelin doonaan. War rasmi ah oo kasoo baxay Safaaradda Mareykanka ee Harare ayey ku sheegtay in xiisadda ka jirta magaalada darteed ay xirtay Safaaradda shaqaalahana si dhow ula socon doonaan hadba xaaladda halka ay mareyso.
Qaraxyo iyo rasaas ayaa laga maqlayaa qeybta Waqooyiga ee Magaalada Harare ee Caasimadda u ah dalka Zimbabwe,waxaana jira Urur dhallinyaro oo hanjabaaddii Milatariga ugu jawaabay in ay dhiiggooda u hurayaan Mugabe. Dadka kale ee ay Milatariga Xabsiga dhigeen waxaa ka mid ah Wasiirka Maaliyadda Ignatius Chombo,waxaa kale oo iyana la tuhmayaa inkasta oo aan la xaqiijin xaaska Mugabe, Grace oo iyada dooneysay in Odaygeeda ay ka beddesho xilka Madaxweynaha.